လိုအပ်ချက်များအတိုင်း မှန်ကန်သော အသစ်မွမ်းမံနည်းကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
1. အွန်လိုင်းမှ အသစ်မွမ်းမံခြင်း
မပြုလုပ်မီ လိုအပ်ချက်များ။ ။
● အသစ်မွမ်းမံခြင်းမစတင်မီ သင့်ဖုန်းကို အင်တာနက်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားရပါမည်။ အွန်လိုင်းမှ အသစ်မွမ်းမံခြင်းသည် ဒေတာပမာဏ တော်တော်စားနိုင်ပါသဖြင့် Wi-Fi ကွန်ရက်ဖြင့် သင့်ဖုန်းကို ချိတ်ဆက်ထားသင့်ကြောင်း အကြံပြုအပ်ပါသည်။
● အသစ်မွမ်းမံနေသည့် အချိန်တောက်လျှောက်တွင် ဖုန်းဘက်ထရီသည် 30% နှင့် အထက် ရှိနေရပါမည်။
● အသစ်မွမ်းမံရန်အတွက် အချိန်လိုအပ်ပါသည်။ အသစ်မွမ်းမံနေချိန်တွင် ပါဝါခလုတ်ကို နှိပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားလုပ်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်ခြင်းများကို မပြုလုပ်နှင့်။ အသစ်မွမ်းမံခြင်း ပြီးစီးပါက သင်ဖုန်းကို အလိုအလျောက်ပြန်လည် စတင်ဖွင့်ပေးပါလိမ့်မည်။
အသစ်မွမ်းမံမှုများ ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် ဆက်တင်များ > အသစ်မွမ်းမံစက် ကို ထိပါ။ အသစ်မွမ်းမံမှု ရှိပါက ဒေါင်းလုပ်ဒ်လုပ်ရန် ထိပြီး သင့်ဖုန်းကို အသစ်မွမ်းမံရန် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပြထားသည့် လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာလုပ်ဆောင်ပါ။
2. HiSuite ကိုသုံးပြီး သင့်ဖုန်းကို အသစ်မွမ်းမံခြင်း
● သင့်ကွန်ပြူတာပေါ်တွင် နောက်ဆုံးပေါ် Huawei HiSuite ဗားရှင်းကို ထည့်သွင်းပြီး ဖြစ်ရပါမည်။ မထည့်သွင်းရသေးပါက http://consumer.huawei.com/minisite/HiSuite_en/မှ ဒေါင်းလုပ်ဒ် ရယူနိုင်ပါသည်။
● လုပ်ဆောင်နေစဉ်တောက်လျှောက်တွင် USB ကြိုးကို ဖြုတ်ခြင်း၊ ပါဝါပိတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖုန်းကို ပြန်စတင်ဖွင့်ခြင်း သို့မဟုတ် မိုက်ခရို SD ကဒ်ကို ထုတ်ခြင်း ထည့်ခြင်းများ မပြုလုပ်ပါနှင့်။
(1) သင့်ဖုန်းကို HiSuite ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး သင့်ကွန်ပြူတာပေါ်ရှိ အသစ်မွမ်းမံခြင်း ကို ကလစ်လုပ်ပါ။
(2) ဗားရှင်းအသစ်တွေ့ရှိပါက သင့်ဖုန်းကို အသစ်မွမ်းမံပါ။ အသစ်မွမ်းမံခြင်း ပြီးစီးပါက သင်ဖုန်းကို အလိုအလျောက်ပြန်လည် စတင်ဖွင့်ပေးပါလိမ့်မည်။
* ပုံများသည် ကိုးကားရန်အတွက်သာဖြစ်ပြီး သင့်ဖုန်းနှင့် ကွာခြားကောင်း ကွာခြားနိုင်ပါသည်။